ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: August 2010
(ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း) ဖဲခိုးဖို့လည်း ပြင်နေရဲ့။
(မြို့မှာ) တခုတည်းသော ကစားနည်းဆိုပြီး
ဇာတ်လိုက်လူအ တချို့ ထွက်လာပြန်တယ်။
ဟေ့... မလုပ်နဲ့... မလုပ်နဲ့...
ရာဇဝင် တကယ်ပဲ ရိုင်းတော့တယ်။
၃၀ သြဂုတ်လ ၂၀၁၀။
Posted by ကိုပေါ on Monday, August 30, 2010
(Photo credit- Link)
ယူပစ်သလို ကောင်းသွားနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာတွေ။
ဖုတ်သွင်းရထား ဆိုက်ရောက်လာပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း။
“ဖုတ်သွင်းရထား” အဓိပ္ပါယ်ကို မူရင်းအနက်အဓိပ္ပါယ်နှင့်မယူဘဲ အောက်ပါအတိုင်း မော်ဒန်ခက်ဆစ်နှင့်အညီ ယူပါရန်။း-)
ဖုတ်သွင်းရထား = ဖုတ်၊ သရဲတစ္ဆေ၊ မကောင်းဆိုးရွားများသာ စီးနင်းလိုက်ပါလေ့ရှိသော ရထားကြီး။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, August 29, 2010
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေ ခွဲထွက်ပြီး ပါတီအသစ်ထောင်သွားတဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းနဲ့ ဦးစိန်လှဦးတို့ကို ကိုယ့်တံတွေးကိုယ်ပြန်မျိုသူ၊ စကားမတည်သူ “ဗလောင်းဗလဲ” လူတွေအဖြစ် ယခင်က ထင်မြင်ယူဆခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီလူကြီးတွေကို အင်မတီး အင်မတန် နုံချာ ညံ့ဖျင်းတဲ့ “လူရှော်ကြီး”တွေ အနေနဲ့ပါ ထပ်မံ အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဧရာဝတီအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ သတင်းတပုဒ်ဖော်ပြထားတယ်။ အဲဒီသတင်းမှာ ဖော်ပြထားတာက ဦးခင်မောင်ဆွေတို့၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့၊ ဦးစိန်လှဦးတို့ ပထမအကြိမ်တင်လိုက်တဲ့ “အသနားခံစာ”ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ အကြောင်းပြန်တယ်။ အသနားခံစာ နောက်ထပ် တကြိမ် ထပ်တင်ရမယ်တဲ့။
အကြောင်းကတော့ ပထမအကြိမ် သူတို့တင်ခဲ့တဲ့ အသနားခံစာထဲမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ အဓိဋ္ဌာန်(ကတိသစ္စာစကား)မပါဝင်တဲ့အတွက်ရယ်၊ နောက်ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အပြုအမူမျိုး နောက်နောင်မှာ မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ခံဝန်ချက်ရယ်၊ တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ မပတ်သက်အောင်နေပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ကတိစကားတွေရယ် မပါလို့ပါတဲ့။
ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ တယ်လဲ မိုက်ပေသကိုးကွဲ့။ ကျွန်ုပ် မဟာပညာကျော် ပိတောက်ရိပ်ပဏ္ဍိတကိုပေါက မဟာဂရုဏာနဲ့ ရေးသားစီရင်ပေးအပ်တဲ့ အသနားခံစာ ကို ယူမသုံးတဲ့အတွက် သည်လို အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်ရပေတာပဲ။
ကျွန်ုပ် ရေးပေးတဲ့ အသနားခံစာထဲမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အသက်နဲ့လဲပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ် အလိုတော်ကို မဆန့်ကျင်ပါဘူးဆိုတာ အဖန်တရာမက ကတိပေးကြောင်း၊ ဤကတိ ဖောက်ဖျက်မိပါက ချီးကားတိုက်၊ မိုးကြိုးပစ်၊ မြွေပွေးကိုက် စသဖြင့် ကျိန်ဆိုပါကြောင်းတွေကို အမြော်အမြင်ရှိရှိ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်း ရေးသားပေးပါလျက်ကနဲ့ ကျွန်ုပ်လို ပဏ္ဍိတကို အားမကိုးဘဲ၊ ဘာမဟုတ်တဲ့ သာမန်ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကို အားကိုးပြီး မိုက်ရူးရဲတော့....အိမ်း.... အခုလို အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းအဖြစ်ကို ကြုံရပေတော့တာပေါ့။ (အမှန်က အီဖေကိုယ် ရေးတဲ့ အသနားခံစာကို ဗိုလ်သန်းရွှေ အရင် ဖတ်ရပုံ ပဲ။ အဲဒါကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ရေးတဲ့ အသနားခံစာကို ဦးသန်းရွှေ ခံတွင်းမတွေ့တော့တာပဲ ဖြစ်မယ်.... ဟိ..ဟိ။)
ဧရာဝတီသတင်းထဲမှာ ဦးခင်မောင်ဆွေပြောတာ တခုရှိသေးတယ်။
“Since the commission said it would report to 'superiors' about our appeal letters, this shows that the commission itself is not independent,” he said.
သူ့စကားကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုကြည့်ရရင်....“ ကျွန်တော်တို့ အသနားခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အထက်(လူကြီးတွေ)ကို တင်ပြပေးပါမယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ လွတ်လပ်ပြီးနှောင်ကြိုးကင်းတဲ့ ကော်မရှင်(Independent commission) မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်”.....တဲ့။
ကျွတ်...ကျွတ်...ကျွတ်.... မောင်မင်းကို ကျွန်ုပ် သနားပါဘိတော့ ဦးခင်မောင်ဆွေရယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ လွတ်လပ်ပြီး နှောင်ကြိုးကင်းတဲ့ ကော်မရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မောင်မင်း အခုမှ သိရှာသကိုး။
ဦးခင်မောင်ဆွေတို့၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာလည်း နအဖ အစိုးရရဲ့ မတရားသဖြင့် နှစ်ရှည် ထောင်ချခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပြီးပြီ။ ဒီလောက် ကျောချထားတာတောင် ဓားပြမှန်း မသိသေးဘူးဆိုတော့ တော်တော့်ကို အသိဉာဏ်နုံနဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း “လူရှော်ကြီးများ” ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ထူးကို ချီးမြှင့်ချင်တာပါ။ ဒီလိုအရည်အချင်းနဲ့များ နအဖ လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီး နအဖရဲ့ စစ်ကျွန်ပြုမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ရအောင် ပြောင်းဦးမယ် ဆိုသေးသဗျား။
အေးလေ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ သဲသဲလှုပ် နန့်နန့်တက် ဝင်ပြိုင်ချင်နေသေးတယ်ဆိုရင်လည်း နေပြည်တော်က အဘရဲ့ ခြေဖမိုးကို နဖူးနဲ့ထိပြီး ဖင်ဘူးတောင်းထောင်အောင် ရှိခိုးဦးတင်အသနားခံလိုက်ပါလို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့၊ ဦးစိန်လှဦးတို့မှာ နောက်ထပ် ထပ်မံ ဆုံးရှုံးကျဆင်းစရာ သိက္ခာဆိုလို့ စိုးစဉ်းမျှပင် မကျန်တော့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) NDF Leaders Told to Appeal Second Time
Posted by ကိုပေါ on Friday, August 20, 2010
Labels: in the news Comments: (24)
စိတ်တွက် တွက်မကြည့်ဘဲ ခန့်မှန်းခြေ သင့်အထင်ကိုသာ ချက်ချင်း ပြောကြည့်ပါ။
“လူသက်တမ်းသည် အနှစ် ၈၀ ဆိုလျှင် ရက်အားဖြင့်ရေတွက်သော် (နှစ် ၈၀ သည်) ရက်ပေါင်း ဘယ်နှစ်ရက်နှင့် ညီမျှသည်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။”
အထက်ပါ မေးခွန်းကို ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်းက နီးစပ်ရာ လူအချို့အား မေးကြည့်မိပါသည်။ စိတ်တွက် မတွက်ပါနှင့်ဟု ကြိုတင်ပြောထားသည့်ကြားက အားလုံးလိုလို ချက်ချင်းပြန်မဖြေဘဲ မျက်လုံးကလေး အပေါ်လှန်ကာ စိတ်တွက် တွက်ချက်နေကြပုံမှာ စိတ်ကုန်စရာပင် ကောင်းသေးတော့သည်။ Kiasu ???
မြန်မြန်ဖြေဖို့ လောဆော်သောအခါ အများစုက “ရက်ပေါင်း ၃ သိန်းခန့် ရှိမည်”ဟု ခန့်မှန်း ဖြေဆိုကြသည်။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး အင်ဂျင်နီယာ ဉာဏ်ကြီးရှင်တယောက်ကမူ “ရက်ပေါင်း တသန်းကျော်တယ်မို့လား” ဟု ထူးထူးခြားခြား ရမ်းတုပ်ဖော်ရလေသည်။
အဖြေမှန် အတိအကျမှာ ရက်ပေါင်း နှစ်သောင်း ကိုးထောင့် နှစ်ရာ ဖြစ်သည်။ ( ၈၀ x ၃၆၅ = ၂၉၂၀၀)
အဖြေထက် ဆယ်ဆခန့် ကျော်လွန်၍ ဖြေဆိုနေကြခြင်းကို ကြည့်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ အများစုသည် နှစ် ၈၀ ဆိုသည်ကို အင်မတန် ကြာရှည်လှသည်ဟု ထင်မှတ်နေကြကြောင်း ထင်ရှားသည်။
အသက် ၄၀ အရွယ်သို့ရောက်နေသူများအဖို့ဆိုလျှင် ရက်ပေါင်း တစ်သောင်းလေးထောင့်ခြောက်ရာသာလျှင် ကျန်တော့သည်။ ဤနေရာတွင် အသက်လေးဆယ်တန်းသို့ ဝင်နေကြပြီဖြစ်သော အသိ ဘလော့ဂါမမတွေကို တသီတတန်းကြီး မျက်စိထဲတွင် မြင်ယောင်လာမိသည်။ သြော်… မိန်းမသားတွေဆိုတာ အသက်လေးဆယ်ဆိုလျှင် အလိုအလျောက် တော်လေးဝ ဝင် မိန်းမသားများ ဖြစ်လာကြသည်မှာ ဓမ္မတာပါကလား။ (ခက်ဆစ်။……..။ တော်လေးဝ = တော်တော်ကို လေးပင်အောင် ဝသောသူများ)။
တဖန် ကျန်ရှိနေသော ရက်တသောင်းခွဲခန့်မှ အိပ်ချိန် ၈ နာရီကို ထပ်မံ ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါက အသက် ၄၀ ပြည့်နေသူများအဖို့ သိစိတ်ဖြင့် ရှင်သန် နေထိုင်ရမည့် ရက်ပေါင်းမှာ ကိုးထောင့်ခုနစ်ရာသုံးဆယ့်သုံးရက်သာ ကျန်ပေတော့မည်။ ရက်တသောင်းပင် မပြည့်တော့။ ဤသည်မှာ သက်တမ်းစေ့ နေရဦးပါမှ ဖြစ်သည်။ အသက် ၆၀ တွင် သေရမည့်သူများ၊ အသက်ငါးဆယ်တွင် သေရမည့်သူများဆိုလျှင် ဘာမှ မကျန်တော့။
ဤသို့တွက်ပြလိုက်သောအခါ အလွန်အမင်း ထိတ်လန့်သွားပုံရသော မိတ်ဆွေတယောက်က “အချိန်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဆန့်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ညဖက်တွင် မအိပ်ဘဲ အလုပ်ထဲ ရောက်မှ အိပ်ငိုက်နေရလျှင် မကောင်းဘူးလား” ဟု တွေးတွေးဆဆဖြင့် ပြောလေသည်။ ကျွန်ုပ်ကလည်း “နေ့ဖက်အိပ်ငိုက်ခြင်းသည် လူ့သဘာဝနှင့် မကိုက်ညီသဖြင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အလုပ်ထဲတွင် အိပ်ငိုက်လိုပါက ညစောင့်အလုပ်မျိုးကို ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်း” ပြန်လှန်၍ အကြံပေးရလေသည်။
ထိုသို့ ရက်တသောင်းအောက်လျော့ကာ ကျန်သည့်အချိန်ထဲကမှ အင်တာနက်ပေါ်တွင် အချိန်ကုန်သွားသည်မှာ တရက်ကို လေးငါးနာရီ အသာကလေးရှိမည်။ နှမြောဖွယ်ကောင်းလေစွ။ သို့ဖြစ်၍ စာဖတ်သူအနေနှင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် အချည်းနှီး အလွန်အကျွံ အချိန်မဖြုန်းသင့်။ (ဤကား ငပြူးက ဦးအောင် ပြဲပြခြင်း မည်၏)။
ကျွန်ုပ်၏ ဘလော့ဂ်တွင် လာရောက်ဖတ်ရှုသူအများစုသည် စင်္ကာပူတွင် ရောက်နေသော မြန်မာများဖြစ်သည်။ အခြားမြန်မာဘလော့ဂ်များတွင်လည်း လာရောက်လည်ပတ်သူအများစုသည် ကျွန်းပိစိက မြန်မာတွေချည်းဖြစ်နေတာကို သတိပြုမိပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်နေရသနည်းဟု စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်သောအခါ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်နေခြေ အကြောင်းရင်းများ ထွက်လာပါသည်။ လုံးဝဥဿုံမှန်မည်ဟု မဆိုလို။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အကြောင်းရင်းများသာဟုသာ မှတ်ကြပါကုန်။
(၁) စင်္ကာပူတွင် မြန်မာလူမျိုးဦးရေ အများအပြားရှိခြင်းသည် အကြောင်းတချက် ဖြစ်နိုင်သည်။ မြန်မာသံရုံး၏ ခန့်မှန်းချက်အရ မြန်မာခြောက်သောင်းကနေ တသိန်းအကြားရှိနိုင်သည် ဆို၏။ စင်္ကာပူအစိုးရ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး(အိုင်စီအေ)ကား ထုံးစံအတိုင်း ကိန်းဂဏန်းတွေကို ထုတ်ပြန်ရန် ၀န်လေးသည့်အတွက်ကြောင့် အတိအကျ သိခွင့်မသာချေ။
(၂) စင်္ကာပူရောက် မြန်မာများတွင် အင်တာနက်ကို သုံးစွဲနိုင်သူ ဦးရေများပြားသည်။
အလုပ်ခွင်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ အင်တာနက်ကဖီးများတွင်သော်လည်းကောင်း အင်တာနက်ကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနိုင်ကြသူဦးရေ အများအပြားရှိသည်။
(၃) အင်တာနက်ကို လက်လှမ်းမီ သုံးစွဲနိုင်ကြသော်ငြား မြန်မာ့လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အခြားမြန်မာ့ရေးရာ ကိစ္စများအား စိတ်မ၀င်စားလျှင် မြန်မာဘလော့ဂ်များကို ဖတ်ဖြစ်ကြမည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် စင်္ကာပူရောက်မြန်မာအများစုသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သံယောဇဉ်မကုန်သေးသော၊ မြန်မာပြည်နှင့် တရင်းတနှီးရှိနေသေးသူများ ဖြစ်နေသေးသည့်အတွက်ဟု ယူဆလိုက ယူဆနိုင်ချေပြန်ပါသည်။
(၄) စင်္ကာပူတွင် အားလပ်ချိန် သွားရောက်လည်ပတ်စရာ နေရာရှားပါးသည်ကလည်း အင်တာနက်ပေါ်သို့ လူတွေ တက်လာစေခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းတခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤအချက်တွင်မတော့ စင်္ကာပူက မြန်မာများ ဘဝမှာ သနားစရာကောင်းလှပေသည်။
(၅) စင်္ကာပူ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို သုံးစွဲကြသော်လည်း စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအများစုသည် အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောဆို၊ရေးသား၊ ဖတ်ရှုနိုင်စွမ်း နည်းပါးသည်။ (အနည်းစုကတော့ ကျွမ်းကျင်နိုင်ပါသည်။) ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားသည့် ဘလော့ဂ်များထက် မြန်မာဘလော့ဂ်များအပေါ် ပိုမို အားသန်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပသို့ပင်ဖြစ်စေ…“တန်ဆေး လွန်ဘေး” ဆိုသကဲ့သို့ အင်တာနက်၏ ကျေးကျွန်မဖြစ်အောင် စင်္ကာပူတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဖတ် မိတ်ဆွေတို့ ကြိုးစားကြပါ။ (ငပြူးက ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ပြဲပြခြင်း။)
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် တိုက်တွန်းရလျှင် အခြားဘလော့ဂ် ဆယ်ခုကို တနေ့ တကြိမ်စီ သွားဖတ်မည့်အစား ကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်သို့သာ တနေ့ ငါးကြိမ်မျှလာကာ ပို့စ်အသစ်မရှိပါက ပို့စ်အဟောင်းများကို ပြန်လှန်ဖတ်ပြီး အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲကြပါကုန်။း-)
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, August 10, 2010
Labels: general Comments: (18)
ဂျာနယ်ထောင် အဲလေ နားရွက်ထောင်၍
ဟိုပေါင် ဒီပေါင် ကပ်သတည်း။
Posted by ကိုပေါ on Monday, August 9, 2010
ဆန်သာပေးကြည့် နန့်နန့်ထွန့်ပါမည် ထင်နေပုံရတဲ့
(အိုကွယ်) မမှန်တာတွေးသည့် ကြံဖွံ့ပါတီ။
စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ဆိုတာကလည်း ခြံထဲမှာ တစီစီ။
အရိုးချည်းလွေးကာ ဗိုလ်စုတ် အဲလေ ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ပီပီ
(ဟိုလေ များတို့က)....အမျိုးသမီးရေးရာရဲ့ ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီ။
အင်း...အမွှေးလက်တောက်တဆုံးသာ မြော်မြင်နိုင်ကြလို့ (မျက်တောင်မွှေးနော်.. မျက်တောင်မွှေး... လျှောက်မတွေးနဲ့)
လေးဘက်ထောက် ကုန်းကာ အော်ချင်နေရှာတဲ့
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တခုလည်း ပေါ်လာရပြန်သည်။
နဖားသန်ရာ ပြေးသူ ငအတွေမှာဖြင့်
အမှားအဖန်တရာ အပေးအယူ မလှချေမှ
အသနားခံစာ ရေးသူဘဝကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပြီ။
တယောက်စိတ်တို အသော့ကော်ကာ ဆဲလေတော့
(ဘာလဲဟ... ဒီငနဲက.... ဟိုလူ့ကော်ဆဲ ဒီလူ့ကော်ဆဲနဲ့)
အတော့်အတော်ကို အာပြဲလို့ မောလှချေပြီ။
အင်း.... ညနေကျရင် ဘီယာထွက်သောက်တာပဲ ကောင်းတော့မည်။
ဟာ....ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူး၊ ကဗျာဖွဲ့ပုံနည်းစနစ်လည်း မညီဘူး လာမပြောကြနဲ့။ ဒါပို့စ်မော်ဒန်လေးချိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်။ ငါ့ကဗျာငါရေး ကြပ်ပြေးရောက်ရောက်။ ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့အမှတ်တရအဖြစ် ဒီနေ့ မြန်မာ့အရေးမှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှ ပေါက်ကရတွေကို ကပေါက်တိကပေါက်ချာ ကဗျာတခုအနေနဲ့ ရေးချလိုက်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, August 8, 2010
Labels: anniversary, Poem Comments: (13)
ကလေးသူငယ်တွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မတရားပြုကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို အသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့ စ ပြီး ကြားဖူးတယ်။ နောက် နိုင်ငံခြားထွက်လာတော့ ဒီအကြောင်းတွေ ထပ်ကာတလဲလဲ ဆိုသလို ကြားဖူးလာတယ်။ ကမ္ဘာကျော် အမှုအခင်းတွေအကြောင်း၊ ဘာသာရေးနယ်ပယ်က ယုံကြည်ကိုးစားအပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်တိုင်က ကလေးတွေအပေါ်မှာ ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီး မတော်မတရားလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် အခုအခါ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက ဝန်ချတောင်းပန်ရတဲ့ အကြောင်း၊ နယ်စပ်က ကလေးသူငယ်ပြည့်တန်ဆာပြဿနာတွေ အကြောင်း စသဖြင့် မကြာမကြာ ကြားရ၊ ဖတ်ရပါတယ်။
ဒါတွေမြင်ရ ကြားရတော့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာရော ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ မရှိနိုင်ဘူးလားလို့ တွေးတောကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးက လိင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အရှက်အကြောက်ကြီးတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးမှုမရှိတာ၊ ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ပညာပေး အလုံအလောက်မရှိတာ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာ စတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်သာ ဒီကိစ္စမျိုးတွေ ဟိုးလေးတကြော် ဖြစ်မလာတာလို့ ယူဆမိပါတယ်။
မြန်မာ့ထုံးစံမှာ သမီးမိန်းကလေးတွေကိုသာ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံဘဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြတတ်ပေမယ့် သားယောက်ျားလေးတွေကိုတော့ သူစိမ်းယောက်ျားတွေနဲ့လည်း လက်လွတ်စပါယ် ပစ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကိုယ့်သားငယ်ကို အရွယ်ရောက်ပြီး သူတွေနဲ့ စိတ်ချလက်ချ ပေးအိပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ ဘယ်သူမှ စိုးစဉ်းမျှ မတွေးမိကြပါဘူး။ ကျနော်တို့လည်း နိုင်ငံခြားကို ထွက်လာတဲ့အထိတောင် မတွေးမိသေးပါဘူး။
တောရွာတွေမှာဆို သားယောက်ျားကလေးတွေကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေ အဖြစ်နဲ့ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား အပ်နှံထားကြတဲ့ ထုံးစံရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်က ရွာမှာ အတန်းကျောင်းတက်တဲ့ အတန်းကျောင်းသားနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဟာ လူပေါင်းစုံ ဝင်ထွက်သွားလာနေကြတဲ့ နေရာမျိုးဆိုတော့ ကလေးသူငယ်တွေကို မတော်မတရားလုပ်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ အဲသည်လို နေရာဌာနတွေမှာ ဖြစ်ပွားကောင်း ဖြစ်ပွားနေနိုင်ပါတယ်။ မတော်မတရား လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဟာ ကပ္ပိယအနေနဲ့ဖြစ်စေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကြီးအနေနဲ့ဖြစ်စေ၊ တည်းခိုတဲ့ ဧည့်သည်အနေနဲ့ဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် သင်္ကန်းဝတ်အနေနဲ့ဖြစ်စေ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ ရုပ်ဖျက်ပုန်းခိုနေနိုင်ပြီး လူမမည် ကျောင်းသားကလေးတွေအပေါ်မှာ လူမသိသူမသိ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကျူးလွန်နေတာမျိုးတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ငယ်ငယ် ကိုရင်ဝတ်တုန်းက ရွာထဲက ကာလသားအချို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ညဖက်တွေမှာ တခါတရံ ပေါက်ချလာတတ်ပြီး ကျောင်းသားတွေ၊ ကိုရင်တွေရှေ့မှာ ပေါက်တတ်ကရတွေ ပြောကြ၊ လုပ်ကြတာတွေ ကြုံဖူးပါတယ်။
နောက်တခုက ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့။
အခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့် ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ဘုန်းကြီးတပါးနဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ အကြောင်းကနေ ဆက်စပ်ပြီးတော့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုတိုင်း၊ သင်္ကန်းဝတ်ဆိုတိုင်းလည်း မယုံကြည်ရပါဘူး။ အကျင့်သီလ စင်ကြယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ရှိသလို အကျင့်မစင်ကြယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ၊ ဦးဇင်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒကာမတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းရှုပ်နေတဲ့ ဦးဇင်းတွေကလည်း အများသား။ ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ဦးဇင်းတပါး အမျိုးသမီးတယောက်ဆီကို ရေးလိုက်တဲ့ ရည်းစားစာတစောင်ကို ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဘွဲ့အမည်က အာနန္ဒာတဲ့။ စာထဲမှာတော့ သူ့ကိုယ်သူ “ကိုကိုနန်” လို့ သုံးတယ်။ ဒီစာဖတ်ရတော့ တချို့ဦးဇင်းတွေ တော်တော်ရှုပ်ပါလားဆိုတဲ့ အသိတော့ ရခဲ့ပါတယ်။ တခါ ဘလော့ဂါ “နဗန” ရဲ့ ပို့စ်တခုထဲမှာ Porn ကြည့်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်း ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်ကို ရေးသားထားတာ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ခက်တာက မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးတွေ၊ ဦးဇင်းတွေဆိုရင် အင်မတန် သြဇာရှိကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုရင် ဒကာ ဒကာမတွေကရော၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကပါ ဖိန့်ဖိန့်တုန်နေအောင် ကြောက်ကြရပါတယ်။ ဘုန်းကြီးမဟုတ်မဟတ် လုပ်နေတာကို (ဘုန်းကြီးကျောင်းသား)ကလေးက သူ့မိဘထံ ပြန်ပြောခွင့်ရတယ်ဆိုရင်တောင် ပြောဝံ့ရှာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောတယ်ဆိုဦးတော့ မိဘက ဘုန်းကြီးရဲ့ အရှိန်အဝါကို ကြောက်တော့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကလေးတွေဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မတရားအလုပ်ခံရဖို့ အခြေအနေမှာ ကောင်းကောင်းကြီး ကျရောက်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာက ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ် ဂရုတစိုက် ရေးသားဖော်ထုတ်ကြတာမျိုး မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ကလေးစစ်သားတွေအကြောင်း၊ ကလေးလုပ်သားတွေအကြောင်းသာ ဇောင်းပေး ရေးသားထုတ်ဖော်နေကြပေမယ့် ကလေးသူငယ်တွေကို လိင်အားဖြင့် မတော်မတရားပြုကျင့်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ အာရုံမစိုက်ကြသေးတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အငြိုငြင်ခံရမှာကို စိုးရိမ်လို့ လက်ရှောင်နေကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ကလေးသူငယ်တွေအပေါ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ နအဖစစ်အစိုးရကိုတော့ အားကိုးနိုင်ဖွယ် မရှိပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုအဖြစ်တွေကို ဖော်ထုတ်ကြဖို့၊ တားဆီးကြဖို့၊ ပညာပေးကြဖို့၊ သြဇာတိက္ကမ ရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးများက ကမကထ ပြုပြီး ဒီလိုကိစ္စတွေ မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်တားဆီးဖို့ နည်းလမ်းများကို ရှာကြံစဉ်းစားကြဖို့ အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, August 7, 2010
Labels: general Comments: (31)
တနေ့သ၌ သိကြားမင်းထိုင်နေသော ကုလားထိုင်လှုပ်သဖြင့်...အဲ... ပဏ္ဍုကမ္ဗလာမြကျောက်ဖျာတင်းသဖြင့် အကြောင်းရင်းကို သိရအောင် လူ့ပြည်သို့ ကြည့်လိုက်သော် လူတယောက်သည် သိကြားမင်း၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံရန် ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်စွာဖြင့် အပတ်တကုတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြောင်း တွေ့မြင်ရသဖြင့် သိကြားမင်းလည်း မနေသာသည့်အလျောက် အသေးစိတ်စနည်းနာရန်အတွက် သင်္ကြန်ကျသည်အထိ မစောင့်ဆိုင်းနိုင်တော့ဘဲ လူ့ပြည်သို့ တမုဟုတ်ချင်း ဆင်းသက်ခဲ့လေသည်။
တေဒူးထန့်.. ဘူနောင်းတေးဘူး... ထန့်ဗျော်ဘူ.....(ဤကား သိကြားမင်းဆင်းလာစဉ် တီးခတ်ရန် တီးလုံး)
သို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သိကြားမင်းလည်း ကြက်ဆူပင်များ မင်းမူနေသော တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်ကို ရောက်လာပေသည်။ ထိုမှတဖန် ဂူဂယ်အတ်သ် ကို Zoom In လုပ်သကဲ့သို့ ထပ်မံ၍ သွားလိုက်ပြန်သောအခါ လူရုပ်ကြီးသုံးရုပ်ရှိသော မြို့တော်သစ်ကြီးတခုဆီသို့ ရောက်သွားလေ၏။ ထိုမြို့တော်ကြီးတွင် သိကြားမင်း၏ ထိုင်ခုံကို အရယူရန် ကြိုးပမ်းနေရှာသော သိကြားအလောင်းကို တွေ့ရသဖြင့် ထိုသူ့အနီးတွင် မကြာချက်ချင်း သိကြားမင်းတို့၏ တန်ခိုးဣတ္ထိပါတ်ဖြင့် ဘွားကနဲမြင်အောင် ကိုယ်ထင်ပြလိုက်လေသည်။
“ဟဲ့... သောက်ပလုပ်တုတ်၊ ဘာကြီးလဲဟ”.... ထိုသူသည် ရုတ်တရက်မို့ အာမေဋိတ်သံပြုရင်း လန့်ခုန်လိုက်သည်။
ထို့ကြောင့် သိကြားမင်းလည်း မနေသာဘဲ.... “ကျုပ်ကတော့ ငါပေါ့.... အဲလေ.... ငါကား သိကြားဖြစ်တော့သကိုး”
ထိုလူ။.............။ “အသံမပေး၊ ဘာမပေးနဲ့ လန့်လိုက်တာ။ ဦးမာဃဆိုတာ ခင်ဗျားကြီးလား။ နောက်ကို အဲသလို မလုပ်နဲ့။ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် အနှစ်တစ်သောင်း ပေးပစ်လိုက်မယ်၊ ဘာအောက်မေ့နေလဲ။ ကဲ...ဆိုပါဦး။ ဘာကိစ္စလဲ။”
သိကြားမင်း။..........။ သင်သည် ကျွန်ုပ်၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံရန် အပတ်တကုတ် ကြိုးစားနေသည်ဟု ကြားသိရသဖြင့် ဟုတ်မဟုတ် စနည်းနာရန် ကျွန်ုပ်ဆင်းလာခဲ့သည်။ ကျုပ်မေးတာကို ဖြေပါ။ သိကြားမင်းရာထူးကို ချိန်ရအောင် သင်ဘယ်လို ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုခဲ့ဖူးသလဲ။
လူ။............။ မေးနေရသေးလား။ ခင်ဗျားတုန်းကလိုပဲ လမ်းထီးလမ်းမတွေ ပြင်ခဲ့၊ ဖောက်ခဲ့ဖူးတာပေါ့။
သိကြားမင်း။...........။ အင်း....သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ ကိုယ့်လူက အပြောအဆို မညက်ပေမယ့် အလုပ်ကတော့ ညက်ပေသားပဲ။ လမ်းတွေ ပြင်ခဲ့၊ ဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ အတော် ပင်ပန်းမှာပေါ့နော်။
လူ။.............။ ဟင့်အင်း.... ဉာဏ်ကို လွှာသုံးတတ်တော့ တယ်ပြီး မပင်ပန်းလှပါဘူး။ တအိမ်တယောက် မထွက်မနေရဆိုပြီး ဆင့်ခေါ် လုပ်အားပေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲ။ ကိုယ်က နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ဆော်သြတတ်ဖို့ပဲလိုတာ။ “အကယ်၍ ပျက်ကွက်ပါက ပျက်ကွက်သူ၏ တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း” ဆိုတဲ့ စာသားလေး ထည့်ပြီး ဆော်သြပေးရတယ်။ အဲဒါဆိုရင် မနေဝံ့ဘူး။ ထွက်လာကြရတာပဲ။ မသိရင် မှတ်ထား။
သိကြားမင်း။..........။ သြော်...မှတ်သားထိုက်ပါပေတယ်။ သာဓုခေါ်တာ နည်းနည်းစောသွားတယ်။ ကဲပါလေ... ထားလိုက်တော့။ တခြား ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်ဖူးသေးလဲ။
လူ။........။ ဘုရားတွေ စေတီတွေလည်း တည်ခဲ့ဖူးတယ်။
သိကြားမင်း။.............။ ဟိုက်..ရှာလပတ်ရည်။ အာဂလူပါလားဟေ့၊ ဘုရားတည်ဖို့ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းနောနော ထက်သန်တဲ့ သဒ္ဓါတရား ဟုတ်နိုင်ရိုးလား။ ငွေတွေအများကြီးလိုမှာမို့ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီ တော်တော်လေးကို ခြိုးခြံချွေတာ စုဆောင်းခဲ့ရမှာပေါ့နော်။
လူ။........။ ဟင့်အင်း.... ဉာဏ်ကို လွှာသုံးတတ်သူအဖို့ကတော့ ဒီလောက်ကြီးလည်း ခြိုးခြံဖို့ မလိုပါဘူး။ ခိုးလို့ ဝှက်လို့ ရတဲ့အထဲက သုံးစွဲပြီး ဘုရားတည်လိုက်တာပါပဲ။
သိကြားမင်း (မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့၍)။..........။ သြော်...ဉာဏ်ကလည်း လွှာပဲ လွှာတတ်လွန်းပါပေတယ်ကွယ်။ သိကြားမင်းတောင် ငိုချင်လာပြီနော်။ ကဲ... ရှိစေတော့၊ ရှိစေတော့။ မင်္ဂလာတရားတော်ထဲက တခြား ဘယ်မင်္ဂလာတရားနဲ့ ညီအောင် နေခဲ့သေးလဲ။
လူ။..........။ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီ ကိုယ့်အဆွေအမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေကို ထောက်ပံ့တယ်။ ကြည့်ရှုစောင်မတယ်။ ပါမစ်တွေ ချပေးတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ကွက်တွေ ကန်ထရိုက်တွေ ချပေးတယ်။ ရာထူးကောင်း၊ နေရာကောင်းတွေဆို ကျုပ်အမျိုးတွေချည်းပဲ။ မယုံရင် တတိုင်းပြည်လုံး လိုက်မေးကြည့်လိုက်ဦး။
သိကြားမင်း။...........။ အင်း....ဉာတကာနဉ္စသင်္ဂဟောဆိုတာကို အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့ ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒ (Nepotism)နဲ့ မှားနေပုံရတယ်။ ဒုက္ခ...ဒုက္ခ... သိကြားမင်း တခါမှ ဒီလောက် စိတ်မညစ်ဖူးသေးဘူးနော်။ အေးလေ.... မေးမိလက်စနဲ့ ဆက်မေးလိုက်ပါဦးမယ်။ လောလောလတ်လတ် ဘာကုသိုလ်များ လုပ်ခဲ့သေးလဲ။
လူ။.........။ ကျုပ်လား။ မကြာသေးခင်ကမှ ဗုဒ္ဓဂါယာကို ဘုရားဖူးသွားပြီး ပြန်လာတာ။ ပြီးတော့ မဟားဒယား ဂန္ဓီပြတိုက်မှာလည်း လေလည်...အဲလေ... ဝင်လည်ခဲ့သေးတယ်။
သိကြားမင်း။.........။ သြော်...သြော်....မဟတ္တမဂန္ဓီကို ပြောတာလား။ ကိုယ့်လူက ဂန္ဓီရဲ့ အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေးဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့တော့ ကောင်းကောင်း ရင်းနှီးတယ်ပေါ့လေ။
လူ။...........။ ဟာ... ဘယ့်နှယ့်ပြောပါလိမ့်။ မရင်းနှီးဘဲ နေမလားဗျ။ အဲဒီလမ်းစဉ် ကျင့်သုံးတဲ့သူတွေကို ထောင်ချတာတို့၊ ဝါးရင်းတုတ်နဲ့ ရိုက်တာတို့၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တာတို့ ကျုပ်အကုန် လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မယုံရင် ယူကျုမှာ ရှာကြည့်လိုက်။ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတွေတောင် ရှိသေး... ဟေး...ဟေး။
သိကြားမင်း။.........။ တော်ပါပြီ... ယုံပါတယ်၊ ယုံပါတယ်။ ကိုယ့်လူနဲ့ စကားပြောတာ ဆယ်မိနစ်မပြည့်သေးဘူး။ ကိုယ့်လူရဲ့ လားရာ လမ်းပြမြေပုံ (road map) ကို ကျုပ်ကောင်းကောင်းကြီး မြင်ရချေပြီတကား။
လူ။.........။ မြင်ရမယ်လေ။ ကျုပ်တို့ကလည်း အလုပ်လုပ်ရင် ရုဒ်မက် ကလေးနဲ့မှ လုပ်တတ်တာ။ အခုပဲ လမ်းပြမြေပုံ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်တော့မယ်။
သိကြားမင်း။...........။ ဟုတ်ပါတယ်။ လမ်းဆုံးကို ရောက်နေပါပြီ။ ဒါထက် ကိုယ့်လူက သေရင် သိကြားမင်းဖြစ်မယ်လို့ တကယ်ကြီးကို ယုံကြည်နေတာလား။ တကယ်လို့ ကျုပ်က နေရာဖယ်မပေးဘူးဆိုရင်ကောဗျာ။
လူ။.........။ (ဘုကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီး) စမ်းကြည့်လိုက်လေ။ ဟို ကျုပ်ရှေ့က အကြီးအကဲ တယောက်တော့ နေရာကို အသာတကြည် ဖယ်မပေးတဲ့အတွက် အရူးဘဝနဲ့ ဇာတ်သိမ်းသွားရတာပဲ။
ဤစကားကို ကြားသောအခါ သိကြားမင်းလည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားပြီး ကိုယ်ယောင်ဖျောက်သွားလေတော့သည်။
“ ဟယ်.... ငမိုက်သား။ သင် နတ်ပြည်ရောက်ပါက နတ်အခွင့်အရေးများကိုလည်း မုချ ချိုးဖောက်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာဖြစ်တယ်။ နတ်ပြည်ကိုတောင် စကြဝဠာမှာ အဆင်းရဲဆုံး ဘုံအဆင့် မရောက် ရောက်အောင် ဆွဲချမယ့်သူလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ယနေ့မှစ၍ သင့်အား နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်ကို ဝင်ရောက်ခွင့် ဗီဇာ ပိတ်ပင်လိုက်ပြီ။ သင်နဲ့တော်ရာ ငရဲဘုံကိုသာ သွားပေရော့...လဟယ်။”
သိကြားမင်း နတ်ပြည်သို့ ပြန်တက်။
တေဒူးထန့်... ဘူးနောင်းတေးဘူ ထန့်ဗျော်ဘူး....ဘူးဘုနေ ဘူနေဘု...ဘူးနောင်တေးဘူ ထန့်ဗျော်ဘူ။
(ဤဇာတ်လမ်းထဲမှ ဇာတ်ကောင်များသည် စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှုရှိပါက ဘွာတေး...နော်... ဘွာတေး။ ဗွေမယူကြေး။)
Posted by ကိုပေါ on Thursday, August 5, 2010
Labels: short story Comments: (9)
ကျွန်တော်တို့သည် နိုင်ငံတော်၏ စေတနာအမှန်ကို ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်လာသည့်အလျောက် မူရင်းပါတီမှလည်း ခွဲထွက်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမှန်း သိပါလျက်နှင့်ပင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ပြိုင်ရန်အတွက် ကျနော်တို့သည် ပါတီအသစ်တခုအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့အား ယခင်က ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခဲ့သော မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူလူထု၏ မျက်နှာကိုလည်း ဤနည်းအားဖြင့် ကောင်းကောင်းကြီး အိုးမဲသုတ်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ကျနော်တို့တွင် ကုန်းကောက်စရာ သိက္ခာနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရန်ပုံငွေပါ တပြားတချပ်မျှပင် မကျန်ရှိတော့ပါ။
ထိုမျှမက အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင်လည်း ကျနော်တို့သည် သစ္စာဖောက်များ၊ အာဏာရှင်ထံတွင် ဒူးထောက်လက်မြှောက်သူများအဖြစ် သမိုင်းတွင်ရစ်ဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ ကျနော်တို့၏ အထွေထွေ မိုက်ပြစ်များကို ညှာတာသနားသောအားဖြင့် ခွင့်လွှတ်တော်မူပါရန်နှင့် ကျနော်တို့အား ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုပါရန် ခြေသလုံးဖက်၍ ရှိခိုးဦးတင် အသနားခံလွှာ တင်အပ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်ခံရပါက တပ်မတော်ဦးစီးချုပ်၏ အလိုတော်ဆန္ဒနှင့် ကွဲလွဲသော လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ကွဲလွဲသော အဆိုများကို မည်သည့်အခါမျှ မလုပ်ဆောင်ပါ မတင်သွင်းပါဟုလည်း အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် ကတိသစ္စာပြုပါသည်။ (... ဒီလူသားရဲ့ သစ္စာဟာ... ကမ္ဘာတည်သရွေ့ပါ....)
ပါတီမှတ်ပုံတင်စဉ်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအား သေတပန်သက်တဆုံး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု ကျွန်တော်မျိုးတို့ ကတိလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဤကတိသစ္စာ မတည်ပါက ကျနော်တို့အား ချီးကားတိုက်၊ မြွေပွေးကိုက်၊ မိုးကြိုးပစ် စသည့် ဘေးရန်များ ထိပါစေသားဟုလည်း အဖန်တရာမက ကျိန်ဆိုပါသည်။
(အသနားခံစာတင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအနေဖြင့် ဤစာကို ကျွန်ုပ်ထံမှ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရန် မလိုဘဲ အဆင်သင့် ယူသုံးနိုင်ပါသည်။)
(၁) NDF အဖွဲ့ဝင်တချို့ကို အသနားခံစာ တင်ခိုင်း
(၂) NDF ခေါင်းဆောင် ၄ ယောက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ အသနားခံစာ တင်ရမည်
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, August 3, 2010
Labels: in the news Comments: (15)